IHuawei Band 6, yeyona smartband ipheleleyo kwintengiso [Uhlalutyo] | Iindaba zeGajethi
IHuawei Band 6, yeyona smartband ipheleleyo kwintengiso [Uhlalutyo]
UMiguel Hernandez | 30/05/2021 10:00 | ngokubanzi, Reviews
Izacholo ze-Smart kunye neewotshi ezifanelekileyo ziimveliso ezikhoyo ngakumbi kubomi bemihla ngemihla. Ngaphandle kwento yokuba ekuqaleni kwezizukulwane zezi zixhobo kubonakala ngathi abasebenzisi bayathandabuza ekusebenzeni kunye noyilo, inyani kukuba iimveliso ezinje Huawei babheje kakhulu kwi wearables kwaye iziphumo ziye zathandeka.
Sihlalutya nzulu iHuawei Band 6 yamva nje, isixhobo esinokuzimela okukhulu kunye neempawu zeemveliso zepremiyamu. Fumanisa nathi ukuba yintoni amava ethu ngeHuawei Band 6, amandla ayo kwaye kunjalo nobuthathaka bayo.
1 Izinto kunye noyilo: Ngaphandle kwesongo esilula
3 Iscreen esikhulu kunye nokuzimela kwayo
Izinto kunye noyilo: Ngaphandle kwesongo esilula
Ngelixa uninzi lwebranti lubheja kumasongo amancinci, kuyilo olungacacanga kwaye sinokuthi phantse sizimisele ukuwafihla, iHuawei yenze ngokuchaseneyo neBand 6 yayo. Esi sacholo sokulinganisa sisondele kakhulu ekubeni ngokuthe ngqo kwi-smartwatch sisikrini, ngokobukhulu nangoyilo lokugqibela. Ngapha koko, ngokuqinisekileyo isikhumbuza ngomnye umkhiqizo webhrendi efana neHuawei Watch Fit. Kule meko sinemveliso entle, eneqhosha kwicala lasekunene kwaye linikezelwa kwiinguqulelo zebhokisi ezintathu: Igolide noMnyama.
Ngaba uyayithanda iBhendi yeHuawei? Ixabiso liya kukothusa kwizikhundla zokuthengisa ezinje ngeAmazon.
Ubungakanani: X x 43 25,4 10,99 mm
Ubunzima: I-18 gram
Imiphetho ijikelezwe kancinane, phakathi kwezinye izinto ukuthanda ukuhlala kwayo kunye nokuxhathisa. Ewe asifumani mingxunya yezithethi okanye ii-microphones kule bracelet, azikho. Umva ngowezikhonkwane ezibini zokutshaja kunye neenzwa eziphethe i-SpO2 kunye nenqanaba lentliziyo. Isikrini sithatha indawo enkulu ngaphambili kwaye ngokungathandabuzekiyo ophambili ophambili kuyilo, owenza ukuba imveliso isondele kakhulu kwi-smartwatch. Ngokucacileyo ukwenziwa yiplastikhi yebhokisi, ethanda ukukhanya kwayo, ngendlela efanayo nemitya eyenziwe nge-hypoallergenic silicone.
Kule nto IHuawei Band 6 Siza kuba neenzwa ezintathu eziphambili, i-accelerometer, i-gyroscope kunye ne-Huawei's optical rate rate sensor, i-TrueSeen 4.0 eya kudityaniswa ukuhambisa iziphumo ze-SpO2. Ngokwenxalenye yayo, unxibelelwano luya kubotshelelwa kwi-Bluetooth 5.0 ethi yona isinike isiphumo esihle esivela kwisandla seHuawei P40 ebesiyisebenzisele iimvavanyo.
Siyawaxhathisa amanzi esingazi ukuba kukhuselwa i-IP kuwo ngokukodwa kwaye sinakho ukuwangenisa kwi-5 ATM. Ngokubhekisele kwibhetri, sine-180 mAh iyonke eya kuthi ihlawuliswe ngezibuko lokutshaja elingumazibuthe elibandakanyiweyo kwiphakheji, Akunjalo kwiadaptha yamandla, ke kufuneka sisebenzise ezinye izixhobo esinazo ekhaya. Le Huawei Band 6 iya kuhambelana nezixhobo ze-iPhone ezivela kwi-iOS 9 kunye ne-Android kwinguqulelo yayo yesithandathu. Asinayo i-wearOS njengoko kunokulindelwa, sineNkqubo yokuSebenza yenkampani yaseAsia edla ngokwenza kakuhle kule misebenzi.
Iscreen esikhulu kunye nokuzimela kwayo
Isikrini siza kuthatha zonke iindawo ezikhanyayo, kwaye kunjalo la IHuawei Band 6 Nyusa ipaneli ye-intshi eyi-1,47 eya kuhlala kuma-64% ngaphambili Ngokupheleleyo ngokweenkcukacha zobuchwephesha, nangona sinyanisekile, ngenxa yoyilo olugobileyo, imvakalelo yethu kukuba ihlala ngaphambili nangakumbi, ke kubonakala ngathi kukho umsebenzi woyilo oluyimpumelelo ngasemva. Oku kubangisana ngqo nokwakhe ubhuti omdala iHuawei Watch Fit, esikrini sayo zii-intshi ezingama-1,64, ikwangunxantathu kuyilo. Asazi ukuba leliphi inqanaba lokhuseleko elinalo, nangona kuvavanyo lwethu luye lwaziphatha njengeglasi enganyangekiyo ngokwaneleyo.
Iphaneli ye-AMOLED inesisombululo see-pixels ezingama-194 x 368sy inenqanaba eliphezulu lokuqaqamba kuneebhongo ezinokhuphiswano ezinje ngeXiaomi Mi Band eyaziwayo. Ngesi sizathu, isikrini siyabonakala ngokukhanya kwelanga, ngaphandle kwento yokuba ayinako ukukhanya okuzenzekelayo. Inqanaba lesithathu eliphakathi kubonakala ngathi lelona liza kusebenza njenge-squire ukuze likwazi ukusiphatha ngokulula ngaphandle kokuqhubeka nokulawula ukukhanya kwaye ngaphandle kokonakalisa ibhetri.
Iscreen sinenqanaba lokuthinta ubuntununtunu obusabele ngokuchanekileyo kuhlalutyo, ukubonakaliswa kwemibala kuyathandeka, ngakumbi ukuba sicinga ukuba isixhobo siyilelwe ukuxhonywa esihlahleni kwaye singonwabeli imovie, ndiyathetha, ukwanda imibala kunye nokungafaniyo ngokukodwa ukuthanda ukufundwa kolwazi i-Huawei Band 6 efuna ukusinika ngalo lonke ixesha. Isikrini sijongeka silungele ukusetyenziswa kwemihla ngemihla.
Ibhetri ayizukuba yingxaki, nangona ezo 180 mAh zinokubonakala zimbalwa kuthi, Inyani yile yokuba ngokusetyenziswa kwemihla ngemihla esikunike yona, iHuawei Band ikwazile ukuyenza sinike iintsuku ezili-10 zokusebenzisa, Ingandiswa ukuya kwi-14 ukuba wenza amaqhinga athile athi ekugqibeleni asithintele ukuba sonwabele isixhobo.
Sinesiseko sokulawula isenzo:
Phezulu: Iziko lezaziso
Ekhohlo okanye ekunene: Iwijethi ezahlukeneyo kunye nokuseta kwangaphambili
Ke siya kuba nakho ukunxibelelana nesixhobo, ngaloo ndlela sihlengahlengise ukukhanya, amabala, imo yasebusuku kwaye siqwalasele ulwazi. Phakathi kwezicelo ezifakiweyo siya kuba nazo:
Inzwa yeoksijini yegazi
Istopwotshi, isibali xesha, ialam, isibane, ukhangelo kunye noseto
Ngokunyaniseka, asiyi kuphoswa nayiphina into kule bracelet, nangona singekhe sikwazi ukuyandisa.
Asinakulindela imisebenzi eyongezelelweyo kuyo, sinesongo sokulinganisa esibetha abachasi bayo kuyilo nakwisikrini ngexabiso lama-euro angama-59Ukunyaniseka, kundenza ndilawule lonke ukhuphiswano ngokupheleleyo. IGPS inokuphoswa, ndiyicacisile, kodwa akunakwenzeka ukubonelela ngakumbi ngentwana encinci. Imakethi ye-smartband "yexabiso eliphantsi" iguqulwe ngokupheleleyo yile Huawei Band.
Ithunyelwe nge: Meyi 30 ye2021
Isikrini esikhulu, esikumgangatho ophezulu
Ukuzimela okukhulu kunye nexabiso eliphantsi kakhulu
Akukho GPS eyakhelweyo
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Reviews » IHuawei Band 6, yeyona smartband ipheleleyo kwintengiso [Uhlalutyo]